Izindaba - Ingabe I-Covid-19 Ingasinda Ezindaweni Zethusi?
I-Copper iyinto esebenza kakhulu elwa namagciwane ezindaweni ezingaphezulu.
Sekuyizinkulungwane zeminyaka, ngaphambi kokuba bazi ngamagciwane noma amagciwane, abantu bebazi ngamandla ethusi okubulala amagciwane.
Ukusetshenziswa kokuqala okurekhodiwe kwethusi njenge-ejenti yokubulala izifo kuvela ku-Smith's Papyrus, incwadi yezokwelapha endala kunazo zonke emlandweni.
Kusukela ngo-1,600 BC, amaShayina ayesebenzisa izinhlamvu zemali zethusi njengomuthi wokwelapha ubuhlungu benhliziyo nesisu kanye nezifo zesinye.
Futhi amandla ethusi ahlala.Iqembu lika-Keevil lihlole izinsimbi ezindala eGrand Central Terminal yaseNew York City eminyakeni embalwa edlule.Uthi: “Ithusi lisasebenza njengoba lalinjalo ngosuku elafakwa ngalo eminyakeni engu-100 edlule."Lezi zinto ziqinile futhi umphumela we-anti-microbial awupheli."
Isebenza kanjani ngempela?
Ukwakheka kwe-athomu okuqondile kweCopper kuyinikeza amandla okubulala engeziwe.I-Copper ine-electron yamahhala egobolondweni layo langaphandle lama-electron abamba iqhaza kalula ekuphenduleni kokunciphisa i-oxidation (okwenza futhi insimbi ibe umqhubi omuhle).
Lapho i-microbe ihlezi phezu kwethusi, ama-ion aqhumisa i-pathogen njengokuhlasela kwemicibisholo, avimbele ukuphefumula kwamangqamuzana futhi abhoboze izimbobo kulwelwesi lwamangqamuzana noma ulwelwesi lwegciwane futhi adale ama-radicals mahhala asheshisa ukubulala, ikakhulukazi ezindaweni ezomile.Okubaluleke kakhulu, ama-ion afuna futhi acekele phansi i-DNA ne-RNA ngaphakathi kwebhaktheriya noma igciwane, ukuvimbela ukuguqulwa okudala izimbungulu ezinkulu ezingazweli ezidakamizwa.
Ingabe i-COVID-19 ingaphila ezindaweni zethusi?
Ucwaningo olusha luthole ukuthi i-SARS-CoV-2, igciwane elibangela ubhubhane lwe-corona-virus, alisatheleleki ngethusi kungakapheli amahora ama-4, kanti lingakwazi ukuphila endaweni yepulasitiki amahora angama-72.
I-Copper ine-antimicrobial properties, okusho ukuthi ingabulala ama-microorganisms afana namagciwane nama-virus.Nokho, i-microorganism kufanele ihlangane nethusi ukuze ibulawe.Lokhu kubizwa ngokuthi "ukubulala othintana naye."
Ukusetshenziswa kwe-antimicrobial copper:
Enye yezinto ezisetshenziswa kakhulu ithusi isezibhedlela.Izindawo eziyingozi kakhulu egunjini lesibhedlela - izinsimbi zokulala, izinkinobho zokushaya ucingo, izingalo zesitulo, itafula lethreyi, okokufaka idatha, nesigxobo se-IV - futhi esikhundleni sazo kwafaka izingxenye zethusi.
Uma kuqhathaniswa namakamelo enziwe ngezinto zendabuko, kube nokunciphisa kwe-83% komthwalo webhaktheriya ezindaweni ezihlala emakamelweni anezingxenye zethusi.Ukwengeza, amazinga okutheleleka eziguli ehle ngo-58%.
Izinto zethusi nazo zingaba usizo njengezindawo ezilwa namagciwane ezikoleni, izimboni zokudla, amahhotela amahhovisi, izindawo zokudlela, amabhange nokunye.